Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.5.4 sahlo yaab
Hadda oo aad qabto dadka Nuurre Aw wada shaqeeyaan dhibaato macno sayniska, iyo inaad leedahay ay diiradda halkaas waxay noqon kartaa ugu qiimaha badan, hubi inaad qolka ka baxaan si ay u aad la yaab. Waa quruxsan qabow oo culumadu muwaadin ayaa ku tilmaamay falagyada ee Galaxy Zoo oo isku laalaaban borotiinada at Foldit. Laakiin, dabcan, taasi waa waxa mashaariic ka mid ah ayaa loogu talagalay in lagu awood. waa ka sii yaab leh maxay, in my opinion, waa in bulshooyinka kuwaas oo soo saaray natiijada cilmi ah in ay ahaayeen filayn xitaa by abuuray ay. Tusaale ahaan, bulshada Galaxy Zoo ayaa helay iyo fasalka cusub oo wax ubadan in ay u yeedheen "Peas Green."
Aad hore ee mashruuca Galaxy Zoo ah, dhowr qof ayaa ogaaday walxaha cagaaran oo aan caadi ahayn, laakiin xiisaha iyaga oo ku cad yihiin marka Hanny Von Arkel, oo macallin ka ah dugsiga Dutch, bilaabay dun in forum doodda Galaxy Zoo la horyaalka eegayey: "Sii Peas a . Fursada "dun, oo waxay bilaabeen August 12, 2007, ku bilaabantay kaftanka:" Ma waxaad iyaga ururinta casho "," Peas joojin ", iyo wixii la mid ah?. Laakiin, soo jiidasho ugu dhakhsaha kale Zooites bilaabay dhajinta digir iyaga u gaar ah. Muddo posts noqday farsamo oo faahfaahsan oo ilaa posts sidan oo bilaabay muujinaya ilaa: "line The OIII (the 'digir' line, at 5007 angstrom) in aad soo socda wakhti oo dhinaca cas sida z kordhay iyo baaba'aa gelin aasaasiga-cas at ah oo ku saabsan z = 0.5, ie waa la arki karin " (Nielsen 2012) .
Muddo Zooites ah ayaa si tartiib tartiib ah fahamka iyo habka indhaynta ah digir ah ay. Ugu dambeyntii, 8dii July, 2008-dhawaad ​​sannad dhan ah ka dib-Carolin Cardamone, arday ah xiddigaha graduate ee Yale iyo xubin ka mid ah kooxda Galaxy Zoo, biiray thread inuu ka caawiyo abaabulka ah "digir Hunt." Shaqada More xamaasad danbayay iyo July 9, 2009 warqad la daabacay ayaa lagu Ogeysiisyada Billaha ah sumalka uguma Royal Society la horyaalka "Galaxy Zoo Green Peas: Discovery of Class ah Compact Aad Star-sameynta falagyada" (Cardamone et al. 2009) . Laakiin, xiisaha digir ma waxaa soo afjaro. Ka dibna, ay ku xiran ee cilmi baaris dheeraad ah by cirbixiyeyaasha adduunka oo dhan (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Markaas, 2016, in ka yar 10 sano ka dib post ugu horeysay by Zooite ah, warqad lagu daabacay Nature jeediyay Peas Green sida sharaxaad suuragal ah in hannaanka muhiim ah oo xujo ah ah ee ionization ee caalamka. None of this abid ayaa waxaa la rogmato markii Kevin Schawinski iyo Chris Lintott ugu horeysay ka hadlay Galaxy Zoo ee baar ah ee Oxford. Nasiib wanaag, Galaxy Zoo karti noocaas ah wax kadis ah oo lama filaan ah oo ay si fudud u oggolaan ka qayb galayaashu in ay wada hadlaan.